Warbixin Shaacisay in 92% Dadka Ku Nool Adduunku ay Qaataan Hawo Wasakhaysan | Berberatoday.com
Warbixin Shaacisay in 92% Dadka Ku Nool Adduunku ay Qaataan Hawo Wasakhaysan
Hargeysa(Berberatoday.com)-Warbixin la soo saaray toddobaadkan ayaa lagu cadeeyay in 92% dadka ku nool dunida ay qaataan hawo wasakhaysan oo aan nadiif ahayn.
Hay’ada caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in loo baahan yahay dhaqdhaqaaq hor leh oo lagaga hortago dhibaatadan, islamarkaana si degdeg ah looga hawl galo, warbixintan oo laga soo diyaariyay 3,000 oo goobood ka mida adduunka oo u badan magaalooyin ayaa waxa la xaqiijiyay in 92% dadka ku nool goobahaasi ay qaataan ama neefsadaan hawo wasakh wadata, taasoo saamayn ku leh habdhiska neefsiga ee qofka.
Haddaba, arrimaha saamaynta ku leh wasakhda hawada ayaa waxa lagu sheegay in ay ka mid yihiin gaadiidka aan sida wanaagsan u shaqayn islamarkaana xumaaday ee sii daaya Carbon-ka, kuwaasoo aad ugu badan waddamada Afrika, waxaanay sababeen caafimaad darro aad xun.
Sidoo kalena waxa ka mida goobaha la dhigo Ijiinada laydhka iyadoo la sheegay in naqaska ka baxa uu la mid yahay kuwa baabuurta ee aan soo sheegnay oo ay dhib u geystaan qofka.
Waxa sidoo kale ay ha’yada caafimaadka adduunka ee WHO sheegtay in 3Millyan oo qof u gaeeriyoodeen arrimo la xidhiidha wasakhda hawada kuwaasoo lagu qiyaasay inay ka ahaayeen 11.6% dadka geeriyooday adduunka.